Nokware som bedi nkonim kɛse (1-21)
Ngodua Bepɔw no mu bɛpae abien (4)
Yehowa bɛyɛ baako, na ne din ayɛ baako (9)
Ɔhaw a ɛbɛba Yerusalem asɔretiafo so (12-15)
Wobedi Apata Afahyɛ no (16-19)
Dadesɛn biara bɛyɛ kronkron ama Yehowa (20, 21)
14 “Hwɛ! Ɛda bi reba; ɛyɛ Yehowa da. Saa da no, nneɛma a wɔanya* afi wo* mu no, wɔbɛkyɛ wɔ wo mu. 2 Mɛboaboa aman nyinaa ano ama wɔne Yerusalem abɛko; na wɔbɛfa kurow no, na wɔafom emu adan, na wɔato mmea mmonnaa. Na wɔbɛsoa kurow no fã akɔ, na wɔn a ɛbɛka no, wɔrenkum wɔn* mfi kurow no mu. 3 “Yehowa bepue ne saa aman no akɔko+ te sɛ ɛda a ɔrekɔ ɔko.+ 4 Saa da no, ne nan besi Ngodua Bepɔw*+ a esi Yerusalem anim wɔ apuei fam no so, na Ngodua Bepɔw no mu bɛpae abien afi apuei* akosi atɔe.* Na ɛbɛma obon kɛse paa abɛda hɔ, na bepɔw no fã bɛtwe akɔ atifi, na ɔfã akɔ anaafo. 5 Na mubeguan akɔ me mmepɔw bon no mu, efisɛ mmepɔw bon no bɛkɔ akodu Asel tɔnn. Na mubeguan sɛnea asaasewosow a esii wɔ Yuda hene Usia bere so nti,+ muguanee no. Na Yehowa me Nyankopɔn bɛba, na akronkronfo nyinaa bɛka ne ho.+ 6 “Saa da no, hann kɛse biara renhyerɛn,+ na nneɛma bɛkyenkyen.* 7 Na ɛbɛyɛ da baako bi a wonim sɛ ɛyɛ Yehowa de.+ Adekyee nni hɔ, na adesae nni hɔ; na anwummere mpo bɛyɛ hann. 8 Saa da no, nkwa nsu+ bɛtene afi Yerusalem;+ ɔfã bɛkɔ apuei po* mu,+ na ɔfã akɔ atɔe po* mu.+ Ɛbɛba ahohuru bere ne awɔw bere mu. 9 Na Yehowa bɛyɛ Ɔhene wɔ asaase nyinaa so.+ Saa da no, Yehowa bɛyɛ baako,+ na ne din ayɛ baako.+ 10 “Asaase no nyinaa bɛyɛ sɛ Araba,+ afi Geba+ akosi Rimon+ wɔ Yerusalem anaafo fam; ɔbɛsɔre, na nnipa bɛba abɛtena ne mu,+ afi Benyamin Pon no ano+ akosi Ɔpon a Edi Kan no ano tɔnn, na ɛbɛkɔ akosi Ntwea So Pon no ano, na ebefi Hananel Abantenten no ho+ akosi ɔhene amoa a wokyĩ nsa wom no ho. 11 Nnipa bɛba abɛtena mu, na wɔrennome no mma ɛnsɛe bio da,+ na nnipa bɛtena Yerusalem dwoodwoo.+ 12 “Aman a wɔbɛko atia Yerusalem no, ɔhaw a Yehowa de bɛba wɔn so ni:+ Wɔn honam bɛporɔw bere a wɔda so gyina wɔn nan so, wɔn ani bɛporɔw wɔ wɔn ani tokuru mu, na wɔn tɛkrɛma bɛporɔw wɔ wɔn anom. 13 “Saa da no, Yehowa bɛma wɔn nyinaa ho ayeraw wɔn; na obiara beso ne yɔnko nsa, na obiara bɛma ne nsa so atia ne yɔnko nsa.*+ 14 Ɔko a ɛbɛkɔ so wɔ Yerusalem no, Yuda nso bɛko bi, na wɔbɛboaboa aman a atwa kurow no ho ahyia nyinaa ahode ano, sika kɔkɔɔ ne dwetɛ ne ntaade bebree.+ 15 “Na ɔhaw a ɛte saa ara bi na apɔnkɔ ne mfurumpɔnkɔ ne yoma ne mfurum ne nyɛmmoa biara a ɛwɔ asoɛe hɔ behyia. 16 “Aman a wɔbɛtow ahyɛ Yerusalem so no nyinaa, obiara a ɔbɛka wom no, afe biara, ɔbɛforo akɔ Yerusalem+ akɔkotow* Ɔhene no, asafo Yehowa,+ na wadi Apata* Afahyɛ no.+ 17 Na asaase so mmusua nyinaa mu, sɛ wɔn mu bi amforo ankɔ Yerusalem ankɔkotow asafo Yehowa, Ɔhene no a, osu rentɔ mma wɔn.+ 18 Na sɛ Egypt abusua amforo ankɔ ankowura kurow no mu a, osu rentɔ mma wɔn. Mmom, ɔhaw a Yehowa de bɛba aman a wɔankodi Apata* Afahyɛ no so no, ɔde bi bɛba wɔn so. 19 Eyi na ɛbɛyɛ Egypt bɔne ho asotwe ne aman a wɔankodi Apata* Afahyɛ no nyinaa bɔne ho asotwe. 20 “Saa da no, wɔbɛkyerɛw agu apɔnkɔ dɔn no so sɛ, ‘Yehowa Ne Ɔkronkronni no!’+ Na nnadesɛn*+ a ɛwɔ Yehowa fi bɛyɛ sɛ nkankyee+ a ɛwɔ afɔremuka anim no. 21 Na dadesɛn* biara a ɛwɔ Yerusalem ne Yuda no bɛyɛ kronkron, na ɛbɛyɛ asafo Yehowa dea, na wɔn a wɔbɛbɔ afɔre no nyinaa bɛba abɛfa bi anoa mu. Na saa da no, wɔrenhu Kaananni* biara wɔ asafo Yehowa fi bio.”+
^ Anaa “asade a wɔanya.”
^ Kyerɛ sɛ, kurow a wɔaka ho asɛm wɔ nkyekyɛm 2 no.
^ Anaa “wɔrentwa wɔn.”
^ Nt., “ɛpo no.”
^ Anaa “renkeka wɔn ho,” ɛbɛyɛ te sɛ nea awɔw ama ayɛ bawee.
^ Anaa “na obiara bɛtow ahyɛ ne yɔnko so.”
^ Anaa “akɔsom.”
^ Anaa “nnadesɛn a ano soso.”
^ Anaa “dadesɛn a ano so.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “oguadini.”